Upcall - အမည်မသိ Caller Identifier Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Upcall - အမည်မသိ Caller Identifier
Upcall - အမည်မသိ Caller Identifier APK ကို
သငျသညျတောင်းဆိုမယ့်သူကိုတွေးမိပါသလား သငျသညျအမည်မသိဖုန်းနံပါတ်ကနေခေါ်ဆိုမှုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရန်လိုပါသလား? ဤတွင်ကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုပြီးခေါ်ဆိုသူ၏သတင်းအချက်အလက်ကိုသိရန်တစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လျှောက်လွှာပါတယ်။ UpCall နှင့်အတူ, သင်, သင့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုသူထွက်ရှာတွေ့ပုံနဲ့ Emocan စတစ်ကာများထည့်အမည်မသိဂဏန်းကိုရှာခြင်းနှင့်တဦးတည်းထိတွေ့နှင့်အတူအုပ်စုတစ်စုခေါ်ဆိုခစတင်နိုင်ပါသည်ကြောင့်အူနေသည့်အခါသင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုသူထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
UpCall မသိသောခေါ်ဆိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် applications များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းစာအုပ် installed မလိုဘဲခေါ်ဆိုသူ၏ရဲ့အရေအတွက်ကကိုဖေါ်ထုတ်အလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်သည်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကို tool ကိုသုံးပြီးသင်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုထွက်ရှာပါ။
အခမဲ့ UpCall လျှောက်လွှာအတွက် features တွေအများကြီးရှိပါတယ်:
• Show ကို Caller ID ကို
• Group မှခေါ်ဆိုမှု
• Option ကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့
သင်အပေါ်အဆက်အသွယ်စာရင်းမဟုတ်သောအရာအတော်များများထံမှဖုန်းခေါ်ရလျှင်, Upcall ကြောင်းအရေအတွက်အနေနဲ့အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကိုပြုကြလိမ့်မည်။ ဒါဟာဖုန်းနံပါတ်ရေးထားလျက်ရှိ၏အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေရှာဖွေမှုများကိုထည့်သွင်းရန်တစ်ဦးအဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကိုပြုကြလိမ့်မည်။
Upcall အသုံးပြု. မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရပ်တန့်!
သင်ကသင့်ဖုန်းမှတဆင့်ဝင်ရှေ့တော်၌ထိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖွင့်ဆွဲထား Upcall အားဖြင့်နံပါတ်များကိုပိတ်ဆို့ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ, သို့မဟုတ်သင်ခေါ်ဆိုခအသံပိတ်နှင့်အသံမေးလ်ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုသူ၏ပေးပို့ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အားလုံးဝှက်ထားနံပါတ်များ, အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာနံပါတ်များသို့မဟုတ်ရုံသတ်သတ်မှတ်မှတ်တိုင်းပြည်ရှေ့ဆက်ပိတ်ဆို့ဖို့ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူသင်ဖုန်းဆက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သူကိုထိန်းချုပ်၌ရှိကြ၏။
သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်မတူဘဲ, သငျသညျတစျခုတညျးကိုမျက်နှာပြင်ကနေအားလုံးသင့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အိမ်ကနေအခါသင်အလုပ်များဖြစ်သည့်အခါ, သင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်သင်မခေါ်လူတွေလက်လှမ်းမှီအခါ။ သငျသညျအစား SMS ၏လျှောက်လွှာအတွင်းမှသင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (Kim က / အပို, Pocket / အပို, ယခု, Caller န်ဆောင်မှု) အတွက်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအသိပေးချက်များလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ကြှနျုပျတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူရဖို့အတှကျအရေးပါသည်ကိုငါသိ၏။ သင်ရုံတစျခုခေါ်ဆိုခနှင့်အတူဤလုပ်ဖို့လိုသလား? သငျသညျ UpCall မှတဆင့်အုပ်စုတစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအုပ်စုထဲမှာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအုပ်စုခေါ်ဆိုခအခြားလေယာဉ်တင်သင်္ဘော subscriber များအားထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
သင့်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုခေါင်းစဉ်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်ကတက်ကောက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင်ကသင့်မှတ်စုကိုမြင်ရမခေါ်ပါစေနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုမှတျပုံနဲ့ emocan စတစ်ကာများထည့်နိုင်သည်။ ဒီ feature ကနေအကြိုးခံစားနိုင်ဖို့အတွက်လျှောက်လွှာများလွန်းဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာ install လုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
ခဏမှာ, သငျသညျစကားပြောရန်ချင်ကြပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်သင်ဖြေဆိုရန်မလိုချင်ကြဘူးကြောင်းဖုန်းခေါ်ခံလျှင်, သင်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်လှစ်မီသတိပေးချက်များကအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်လျှင်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်သည့်အခါထို့အပြင်, ခေါ်ဆိုကြေညာချက် "ငါသည်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရောက်ရှိနိုင်ဘူး", သင်သည်အဝင်ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူတက်လိုကျလြှောကျနိုငျကွားရ
သငျသညျရဲသို့မဟုတ်လူနာတင်ယာဉ်အရေအတွက်ကသတိရမစိုးရိမ်ထိတ်လန်ရန်မလိုပါ! Upcall နှင့်အတူအရေးပေါ်နံပါတ်များကိုအလွယ်တကူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျအနီးဆုံးဆေးဆိုင်တဦးတည်း-click ရှာပြီးခေါ်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏အော်ပရေတာနာမကိုအမှီ UpCall ကျေးဇူးတင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
* ဒီ application ကိုအားလုံးတူရကီအော်ပရေတာ '' တဲ့ subscribers အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အင်္ဂါရပ်အချို့သာဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်ရက်ကန့်သတ်ချက်များ၏ Turkcell စာရင်းသွင်းသူကန့်သတ်ခံရပေလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်ကို http://www.turkcell.com.tr/services/upcall#sss သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး
ပံ့ပိုးမှု: သင်က "အကူအညီ & ပံ့ပိုးပေးပါ" menu ကိုအောက်မှာလျှောက်လွှာ၏ "ဆက်သွယ်ရန်" အပိုင်းကနေလျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်တိုင်ကြားမှုများ forward နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ UpCall ခွဲမီနူးနှင့်အတူ, သငျသညျရုပ်ပုံနှင့် Group မှခေါ်ရန်ပိုပြီးပိုမိုမြန်ဆန် features တွေနဲ့ Call မှရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းရောက်ရှိ, အမည်မသိတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တည်နေရာနံပါတ်များ, အနီးဆုံးဆေးဆိုင်နှင့်အရေးပေါ်နံပါတ်များကိုတစ်ခုတည်းစာမျက်နှာကနေအလွယ်တကူဖြစ်ကြသည်။
လျှောက်လွှာထဲမှာ "အကူအညီ & ပံ့ပိုးပေးပါ" menu ကိုအောက်မှာအပိုင်း "အမေရိကန် CONTACT" ။
Upcall - အမည်မသိ Caller Identifier
15.57 ကို MB
TrueCaller App ကိုအကြံပေးချက်များ
အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း။ opensource / ကြော်ငြာမရှိ။